Nbudata F-16 na-alụ ọgụ Falcon FSX & P3D - Rikoooo
downloads 69 175
ebube add-on ghọrọ ka ọrụ zuru oke na FSX na P3D, ịkpụzi site Kirk Olsson dị ịtụnanya. Ihe nlere a (Viper) biara na udiri 22 na udiri 4. Afterburner na akụkụ a na-emegharị emegharị, a na-ahụkarị ụda, omenala, akwa, akara mmiri, HUD, 2D Panel.
The General Dynamics F-16 Na-alụ ọgụ agụ nkwọ bụ a multirole fighter mepụtara site na United States n'oge 1970s Nyere iwu ihe karịrị 20 mba, wuru n'okpuru ikikere na Turkey, South Korea na otu ìgwè nke anọ mba NATO F-16 na 2013 bụ fighter kasị eji ke ererimbot, dị ka otu atụmatụ, 2,309 ụgbọ elu ke ọrụ na 2012 ma ọ bụ 15% niile ọgụ ugbo elu na ụwa. 4 500th oyiri napụtakwara na April 2012 na mmepụta a na-atụ anya na-anọgide na ọ dịghị ihe ọzọ ruo mgbe 2017 n'ihi na mbupụ. (Wikipedia)
1. N'ụzọ zuru ezu ịgbatị flaps (F8).
2. Rụọ ọrụ adọba ụgbọala breeki na-asọ trotul ka zuru ike. Jide breeki maka 2-3 sekọnd (rụpụta ike).
3. Hapụ breeki na bugharia na 125-135 mara akpụ.
1. Belata ọsọ na-340 mara akpụ na airbrake (/).
2. Ịgbatị Flaps ka full (F8). Gbanwee ọsọ na trotul na airbrake na-anọ na ife efe mkpọda.
3. Approach runway gburugburu 200 mara akpụ.
4. Tupu runway na banyere 165 mara akpụ ịgbatị airbrake (/), pitch imi elu
ma na-amụba trotul iji nwayọọ na-nrida.
5. Bee trotul na touchdown n'etiti 145-155 mara akpụ.
6. Jide mma imi pitch ruo mgbe ọsọ e belata ka n'etiti 130-140 mara akpụ.
Mgbe ahụ ji nwayọọ nwayọọ belata imi na ide breeki n'etiti 100-120 mara akpụ.